घाटामा भनिएको आयल निगमसँग बोनसका नाममा ३ अर्ब बढी रकम ! - Himali Patrika
घाटामा भनिएको आयल निगमसँग बोनसका नाममा ३ अर्ब बढी रकम !
हिमाली पत्रिका ६ बैशाख २०७८, 7:25 am
काठमाडौं । सँधै घाटा देखाउने आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि गरेको छ । तर, कर्मचारीलाई बोनस उपलब्ध गराउने नाममा सात वटा आर्थिक वर्षदेखि नेपाल आयल निगममा ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ जम्मा रहेको छ ।
यसअघि चैत २२ गते मूल्य बढाएको थियो । मूल्य बृद्धिसँग अब पेट्रोलको प्रतिलिटर १ सय २१ रुपैयाँ भएको छ । त्यस्तै, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ४ रुपैयाँ पुगेको छ ।
एकातिर निगम घाटामा गएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्दै आइरहेको आयल निगमले नाफा भएको वर्षको बोनस रकम छुटाउदै आएको छ । पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै उपभोक्ता आक्रोशित छन् ।
२०६५/६६ १९ करोड ८८ लाख ४६ हजार १ सय ३२
२०७१/७२ ९० करोड २५ लाख २८ हजार २ सय ७०
२०७२/७३ १ अर्ब २६ करोड १७ लाख ६१ हजार
२०७३/७४ ७७ करोड १२ लाख १३ हजार ५१
२०७४/७५ ४ करोड ७९ लाख ६३ हजार ८ सय ४५
२०७५/७६ ११ करोड ६७ लाख १७ हजार १ सय ७८
२०७६/७७ १७ करोड ४२ लाख ६९ हजार १ सय ४१
मूल्य समायोजनका नाममा महिनामा २ पटकसम्म मूल्य वृद्धि गर्दै आइरहेको निगमले पछिल्लो पटकमात्रै अर्धमासिक रूपमा ८८ करोड ४ लाख रुपैयाँ घाटामा रहेको बताएको छ ।
तर, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन ।